Soomaali haysta dhalashada Norway oo la sheegay in uu qayb ka ahaa kooxdii weerartay Westgate – Radio Daljir
Soomaali haysta dhalashada Norway oo la sheegay in uu qayb ka ahaa kooxdii weerartay Westgate
Oktoobar 18, 2013 4:38 b 0
Oslo, Oct 18 – Booliska dalka Norway ayaa baaritaan ku wada nin haysta dhalashada dalkaas, haseyeeshee asalkiisu uu Soomaali yahay, kaddib markii uu soo baxay warka sheegaya in kooxdii fulisey weerarkii Westgate uu qof Norwegian ahi ku jirey.
Ninkan oo lagu magacaabo Xasan Cabdi Dhuxulow, da’diisuna ay 23jir tahay, waxaa la rumeysan yahay in uu qayb qaatay dejinta qorshihii uu weerarkaasi u dhacay isagoo sidoo kale qayb ka ahaa kooxdii weerarka fulisey.
Qof ay ninkan eedeysanaha ah qaraabo yihiin oo la hadlay BBC-da, ayaa sheegay in sanadkii 2009 uu ka tegey magaalada Larvik ee dalka Norway isagoo u dhoofay dhinaca Soomaaliya.
Dhinaca kale, hay’adda sirdoonka Norway ayaa sheegtay in todobaadkii hore ay dalka Kenya u dirtay saraakiil soo xaqiijiya waxa ka jira warka sheegaya in nin haysta dhalashada Norway uu ku lug lahaa weerarkii Westgate ee magaalada Nairobi.
Weerarkii lagu qaaday Westgate Mall -oo ahaa dhisme ganacsi oo ay ajaanibta iyo dadka ladni ka dukaameystaan- waxaa ku geeriyoodey 67 qof, sida ay madaxda dalkaasi horay u shaaciyeen.
Mas’uuliyadda weerarkaas waxaa sheegtay ururka Al-shabaab oo xiriir la leh Al-qaacida, haseyeeshee waxaan ilaa iyo hadda cadeyn tirada kooxda weerarkaas fulisey iyo dalalka ay u kala dhasheen.
Uganda oo heshay macluumad dheeraad ah oo muujinaya in weeraro Argagixiso laga fulinayo Kampala
Col. Qaalib ?Ciidamada Jubba banaanka ayaa loo saaray si loo qabto deegaanada naga maqan?